पुर्वयुवराज पारस फेरी बि*बादमा, वसन्तपुरमा यस्तो के गरेको ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/पुर्वयुवराज पारस फेरी बि*बादमा, वसन्तपुरमा यस्तो के गरेको ?
काठमान्डौ , पुर्व युवराज पारस शाह नजिकमा बसेर बाहिरीएकाहरु भन्ने गर्छन् पारस गँ*जडीको घेरा ब*न्दीमा छन् गँजडीले जे सुनाउँछन् त्यही सत्य हो भन्छन् बि*श्वास गर्छन् । न*सालु प*दार्थको से*वन बिना बस्नै सक्दैनन भन्ने आ*रोप लगाउने गरेका छन् । के यो उनी माथिको आ*रोप सत्य हो त ? अब यहि आ*रोपलाई फलो गरौ आइतबार वसन्तपुर भ्रमणमा गएका पारस न*शा कै तालमा थिए की भनेर सामान्य अ*नुमान लगाउन सकिन्छ । उनको हाउ भाउ र ब्य*बहारले शं*का गर्ने प्रसस्तै ठाउँहरु छन् ।
उनि जनताको माझमा हिंड्दा हात बाँधेर हिडिरहेका छन् के यो स्व*भाविक हो ? कहिले दाँया पटिका मानिस सँग ठो*किएका छन् कहिले बायाँ पट्किा मानिस सँग । प्राय उनि जमिनमा हेरेर हिँडीरहेका छन् । जनताले जयजयकार गरिरहेको अवस्थामा पुर्व युवराजको सम्बोधन यस्तै हो त ?अर्को दृश्यमा पारस कुर्सीमा बस्दा बि*न्दास पाराले बस्छन् र जुस पि*उँछन् अनि मात्रै जनतालाई चि*यर्स गर्छन् । यहि हो तर दरवारीयाहरुको सिल शोभाव र खानदानी तरीका ? उनि कुर्सीमा बस्दा समेत स्थिरसँग बस्न सकिरहेका छैनन् । दृश्य नै काफी छ ।
केही पत्रकारले जनतालाई हजुरको सन्देश भनेर प्रश्न गर्दा म बोल्दीन भन्दै हाँसीरहेका पारसले त्यस पछि वसन्तपुर आसपासमा भएका कुमारी मन्दीर,कालभैरव मन्दिर लगायतका मन्दिरहरुमा दर्शन भ्रमण गरेका थिए । उनको उपस्थितीलाई स्थानियहरुले बाजा गाजा सहित भब्य स्वातग गरेका थिए भने समर्थकहरुले राजा आउ देश बचाउ भन्दै राजसंस्थाको पक्षमा ना*रावाजी गरेका थिए ।